Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM oo si rasmi ah ula wareegay Degmada Jowhar
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa si rasmi ah ula wareegay gacan ku haynta degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe; kaddib markii xoogagga Al-shabaab ay isaga baxeen aroornimadii hore ee maanta oo Axad ah.
“Degmada Jowhar waxaa ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo wata gaadiidka dagaalka oo fara badan, dadka intooda badan guryahooda ayay ku jiraan, waxaase jira dad magaalada dhexmaraya,” ayuu yiri goobjooge la hadlay saxaafada oo diiday in magaciisa uu sheego.
Saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay degmadaas ku galeen dagaal la’aan, waxayna guul weyn ku tilmaameen qabsashadeeda, inkastoo AMISOM aysan weli ka hadlin qabsashada degmada Jowhar.
« Dowladda Soomaaliya oo codsi gaar ah u dirtay dowladda Turkiga
Somali sports supremo ready to pay ultimate sacrifice »